September 1, 2020 - Padaethar
September 1, 2020 Padaethar 0
တာမွေလူနာ (၇၃၆) သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြမီ ရက်ပိုင်းအလိုက အိမ်တွင် ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်၍ အလှူလုပ်ခဲ့ တာမွေမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်း မြို့သစ် ၁ လမ်းတွင်နေထိုင်သော လူနာအမှတ် ၇၃၆ သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြခင် ၅ ရက်အလိုတွင် ၎င်း၏အိမ်၌ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်၍အလှူလုပ်ခဲ့ကြောင်း တာမွေမြို့နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ […]
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲမှ တစ်ထောင်ဆု ပေါင်မြို့မှကံထူးရှင် မှနျပွညျနယျ ပေါငျမွို့ 555 ထီဆိုငျလကျခှဲ လောကနိဗာနျထီဆိုငျမှ သိနျးတထောငျဆုကို ပေါငျမွို့ကဒါရပျကှကျ မွို့သဈ၂လမျးဦးဖသေနျးမှ ဆှတျခူးရရှိခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါသညျ။ Crd : Michael Kyaw Mya Win #Myanmar_Online_News #အောငျဘာလသေိနျးဆု unicode (၁၉)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလသေိနျးဆုဖှငျ့ပှဲမှ တဈထောငျဆု […]
(19) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ထီဖွင့်ပွဲထီပေါက်စဉ်များ ၊ ကျန်ဆုများကို ထပ်ဖြည့်ပေးသွားမှာပါ …. သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး ပ ၃၀၇၆၆၆ သိန်းတစ်သောင်းဆု သ ၈၂၈၇၀၉ သိန်းငါးထောင် ဋ ၆၅၇၅၅၁ စ ၉၁၁၉၇၃ သိန်းနှစ်ထောင် ဓ ၂၈၄၉၀၆ ဘ ၇၅၀၈၉၃ ပ […]
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် editလုပ်တင်ပေးပါမည် သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး ပ ၃၀၇၆၆၆ သိန်းတစ်သောင်းဆု သ ၈၂၈၇၀၉ သိန်းငါးထောင် ဋ ၆၅၇၅၅၁ စ ၉၁၁၉၇၃ သိန်းနှစ်ထောင် ဓ ၂၈၄၉၀၆ ဘ ၇၅၀၈၉၃ ပ ၁၀၀၈၈၇ ကဂ ၉၂၆၇၈၉ […]
ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန် ပြည်သူအပေါင်း စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တစ်လမှာ တစ်ခါသာကံစမ်းခွင့်ရကြတဲ့ ထီထွက်ရှိလာပါပြီနော်… အားလုံးကံစမ်းထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို ဒီလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘယ်သူဆွတ်ခွတ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ ကျန်ဆုများကိုလည်း ဘယ်သူတွေကဆွတ်ခူးမလဲ မသိသေးပေမယ့် ခုဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ထီပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အားလုံးကျန်းမာပြီး ထီပေါက်ပြီး လှူနိုင်တန်းနိုင် […]
အကြွေး များနေသူများအကြွေး အမြန်ဆပ်နိုင်အောင် ယတြာလေးပါ … ။ စီးပွားရေး လုပ်သလောက် အဆင်မပြေ၊ ကျိုးစားသလောက် အရာမထင်သူများလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်…. ။ လုပ်နည်းလေးက မခက်ခဲတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ။ သင်၏ အသက်ကို (၄)ဖြင့် မြှောက်ပါ … ။ ရသော […]